Wararka - Waxyaabaha Baakada saxarka la mariyo
Baakaduhu waxay maraan dhammaan nidaamka silsiladda sahayda laga soo qaado alaabta ceyriinka ah, soo iibsiga, wax soo saarka, iibka iyo isticmaalka, waxayna la xiriirtaa nolosha aadanaha. Iyada oo si joogto ah loo fulinayo siyaasadaha ilaalinta deegaanka iyo kor u qaadista ujeedooyinka ilaalinta deegaanka ee macaamiisha, wasakhda aan lahayn “baakadda cagaaran” ayaa heshay feejignaan dheeri ah. Badeecadaha caaga ah, gaar ahaan polystyrene xummada leh (EPS), waxay leeyihiin faa'iidooyin qiimo hooseeya iyo waxqabad wanaagsan, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha wax lagu baakadeeyo. Waxay baabi'in doontaa deegaanka waxayna sababi doontaa “wasakh cad”.
Wax soo saarka saxarka saxarka waa fiber asaasiga ah ama fiber labaad oo ah walxaha ceyriinka ah ee ugu muhiimsan, fiber-kiina wuu fuuqbaxay oo waxaa sameysmay caaryo qaas ah, ka dibna waa la qalajiyey oo la isku daray si loo helo nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha ku jira. Way fududahay in la helo alaabta ceyriinka ah, wax wasakh ah kuma lahan habka wax soo saarka, alaabtu waxay leeyihiin faa'iidooyin anti-seismic, buffering, breathable and anti-static performance. Sidoo kale waa wax dib loo cusbooneysiin karo oo sahlan in la xaalufiyo, sidaa darteed waxay leedahay rajo codsi ballaaran oo ku saabsan baakadaha ee warshadaha elektarooniga ah, warshadaha kiimikada maalinlaha ah, cusub iyo wixii la mid ah.
Sanduuqa Baakadaha Cuntada Degdega ah, Khaanadaha Baako Baako Baako Baako, Dheehista Duubista Saxarka Haya, Dhammaan Noocyada Kala Dheehista Duubista Mashiinka Xannibaadda, Sanduuqa Baakadaha Cuntada, Shaybaarka Saxarka Dyed,